Na Eo Aza Ny Fahasimbàna Vokatry ny Tondra-drano, Mbola Mandany An-tapitrisany Amin’ny Kodiarana Lehibe Ihany Ny Governemanta Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Español, русский, srpski, English
Farafahakeliny 21 ny olona maty, ary am-polony no tsy hita sy naratra, tamin'ilay tondradrano izay nikapoka an'i Skopje renivohitr'i Makedonia , taorian'ireo orambe nivatravatra ny 5 Aogositra. Nahatratra hatramin'ny 1,5 metatra (4 ft 11 in) ny haavon'ny rano tamin'ireo toerana sasany, satria tsy naharaka na tsy misy mihitsy aza ireo rafitra famoahan-drano.
Raha an-dàlana ireo ezaka famonjena, nangataka tolo-tànana fanampiana avy amin'ireo olompireneny ny governemanta, ary nanomboka nanaiky fiantrana avy amin'ireo firenena mifanila vodirindrina aminy ihany koa. Tao anatin'ny efatra andro, nanolotra 427.708 euros ireo olompirenena tsotra amin'ny fanolorana mivantana ny vola amin'ny fikambanana mikarakara ny vonjy taitra, Vokovoko Mena na amin'ny alàlan'ny ‘hotline’ an'ny governemanta.
Kanefa, maro ireo tezitra hoe mbola manohy mandany vola amin'ilay tetikasa mampihebohebo azy, Skopje-n'ny taona 2014 ihany ny governemanta, izay mikendry ny hanome endrika “tsangambato sy mahafinaritra” kokoa ny renivohitra, izay manindrahindra ny lova goavan'i Makedonia amin'ny alalan'ny fanamboarana sy fanavaozana ireo tranombakoka, tetezana, tsangambato sy tranoben'ny governemanta.
Nanangona 17. 000 dolara ireo zanaka am-pielezana. Mandany in-1117 mihoatra isika amin'io kodiarana lehibe io.
Nanipika ihany koa ireo olontsotra fa tokony ampiasana amin'ireo toerana nisy tondradrano , ahitàna ireo vohitra sy tanàna manontolo izay tondraky ny fotaka ny làlana sy trano, ny fitaovana sy ireo mpiasa nampidirin'ny governemanta hiasa amin'ny Skopje 2014.
Noresahan'ny mpampiasa Twitter @SeirDotMk ny momba ny “mantra” -n'ireo mpomba ny governemanta hoe ” mba manamboatra zavatra aza izy ireo farafaharatsiny”, raha naneho hevitra momba io olana io:
Namaly toy izao ny Filohan'i Makedonia, Gjorge Ivanov, rehefa nanontaniana raha mety hamadika ny vola natokana ho an'ilay Kodiarana Lehibe ho an'ireo tràboina sy hanamboarana rafitra fiarovana amin'ny tondradrano: